जान्नुहोस्, डेंगूका लामखुट्ट्रे सबै भन्दा भिन्न किन हुन्छन र टाेकेकाे कति दिन पछि थाहा हुन्छ ? - Lekhapadhee
लेखापढी २ असार २०७७, मंगलवार १५:४९
काठमाडाैं । बर्खाकाे मौसममा डेंगूको चेतावनी धेरै बढेको छ । यसकाे प्रकाेप जुलाई देखि अक्टूबर (असार देखी भदाै सम्म) सबै भन्दा बढी फैलने गर्दछ । यो मौसममा डेंगू राेग सार्ने लामखुट्टेका लाागि उपयुक्त समय हाे त्यसैले यस माैसममा डेंगू राेगबाट धेरै जसाे मानिसहरूलाइ लाग्ने गर्दछ । याे माैसममा डेंगूकाे लागि सबै भन्दा बढी सतर्क रहनु जरूरी छ । डेंगूका लामखुट्टे अन्य लामखुट्टे भन्दा फरक हुन्छन् र यहाँ डेंगू सार्ने लामखुट्टेहरूकाे बारेमा जानकारी दिनेछाैं ।
डेंगू सार्ने लामखुट्टेहरू कस्ता हुन्छन् ?
जसको लामखुट्टेकाे टाेकाइबाट डेंगू हुन्छ, त्यो मच्छरको नाम पोथी एडिस एजेप्टी लामखुट्टे हाे जसलाई हामी सजिलै चिन्न सक्छौं । यसको शरीरमा खैरा धर्सा हुन्छन् । यो धेरै बढी उचाइसम्म उड्न सक्दैन । डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वौपेक्टस नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीब्र भाइरल संक्रमण हो । यो भाइरस डेंगु १, डेंगु २, डेंगु ३ र डेंगु ४ गरी चार प्रकारका हुन्छन् । एडिज लामखट्टे कालो रंगको हुन्छ, जसमा सेतो थोप्लो पनि देखिन्छ । इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका भेक्टर कन्ट्रोल इन्सपेक्टर उत्तमराज प्याकुरेलका अनुसार, वयस्क लामखुट्टेको आयु करिब एक महिनाको हुन्छ । यो लामखुट्टेले उज्यालोमा र दिउँसो बढी टोक्ने हुनाले रगत चुस्नका लागि बाधा पुग्ने हुँदा पूरा रगत खान धेरैजनालाई टोक्ने गरेको छ। डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वौपेक्टस नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीब्र भाइरल संक्रमण हो । यो भाइरस डेंगु १, डेंगु २, डेंगु ३ र डेंगु ४ गरी चार प्रकारका हुन्छन् । एडिज लामखट्टे कालो रंगको हुन्छ, जसमा सेतो थोप्लो पनि देखिन्छ ।
यो लामखुट्टे सफा पानी जमेको ठाउँ जस्तो बाटा, टायर, बाल्टिन, गमला, एयर कन्डिसनर, थोरैभन्दा थोरै पानी जम्ने बिर्को, पानी जम्मा भएको खुला ट्यांकीमा फुल पारेर आफ्नो वंशवृद्घि गर्छ ।
डेंगु लामखुट्टेले टाेकेकाे कति दिनमा देखिन्छ ?
डेंगु लामखुट्टेले टाेकेकाे दिनमा याे राेगका लक्षण देखिदैनन् । केही दिन पछाडि मात्र यसकाे प्रभाव देखिन थाल्दछ । एडीस लामखुट्टेले टाेकेकाे ३ देखि ५ दिन पछाडि यस राेगका लक्षण देखिन थाल्दछन् ।
– नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने
– रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोश हुने आदि लक्षणहरू पनि देखा पर्न सक्छ ।
Source: https://www.nepalihealth.com/2016/10/22/11869/, https://swasthyakhabar.com/story/8476, https://www.jagran.com/lifestyle/health-know-what-time-does-dengue-mosquito-bite-and-warning-signs-of-dengue-19442528.html, https://nepalkhabar.com/newspaper/7862-2019-09-14-03-12-52